Taratasin'ny mpamaky: Tsy tompon'antoka intsony ny Filoha teo aloha Rajaonarimampianina
mercredi, 16 janvier 2019 15:21
Nanambara moa ny Filohan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana fa aorian'ny fanaovan'i Filoha vaovao, Andry Rajoelina, fianianana vao manomboka ny fotoam-piasany ka eo izy vao afaka manao fifamindram-pahefana amin'ny Filoha teo aloha.
Marina fa ny andininy faha 41 ao amin'ny LALAMPANORENANA dia milaza fa ny fifamindram-pahefana dia ifanaovan'ny FILOHAN'NY REPOBLIKA teo aloha sy ny FILOHAN'NY REPOBLIKA vao lany ka hiditra. Midika izany fa ny président du sénat izay filoham-panjakana dia nisahana ny fampandehanan-draharaha andavanandro ("expédition des affaires courantes ") fotsiny ihany. Na izany na tsy izany anefa, TSY AFAKA NY HOE TONGA DIA HANDRAY ASA IO " président du sénat " izay lasa chef de l'État na filoham-panjakana io fa TSY MAINTSY MISY NY FIFAMINDRAM-PAHEFANA na passation eo aminy sy ilay FILOHAN'NY REPOBLIKA izay nametra-pialana satria nilatsaka ho fidiana.
Tsy "geste" fampisehoana lakile mantsy ny passation na fifamindram-pahefana fa tena misy dia misy tokoa ny taratasim-panjakana ofisialy na "documents Administratifs officiels" hosoniavina izay raha fintinina, dia manondro ny hoe: "IZAO NY FITAOVANA, ZAVATRA NAFINDRAKO TAMINAO HANDIMBY AHY".
Ary rehefa vita io "passation" io dia MIDIKA IZANY FA TSY HO VOASARINGOTRA AMIN'IZAY HISEHO AORIAN'IO INTSONY ILAY OLONA NIALA.
Koa efa nisy ny passation teo amin-dRAJAONARIMAMPIANINA sy RIVO RAKOTOVAO, dia midika izany fa efa TSY TOMPON'ANDRAIKI-PANJAKANA INTSONY i RAJAONARIMAMPIANINA. Ary na ny fidirana ny Lapam-panjakana aza dia TSY AZONY ATAO INTSONY, fa vahiny izy eo raha miditra any.
Tranga iray mampivandravandra ny lesoka lehibe amin'ny LALAMPANORENANA io
Ny mpamaky tsy tapaka.